Iindaba-Ngaba uyayazi imoto ehamba phambili?
Isithuthi se-Stepper licandelo lolawulo oluvulekileyo lokuvula eliguqula isiginali yokubetha yombane ibe kukufuduka okujikelezileyo okanye ukufuduka komgama. Kwimeko yokungagqithisi umthwalo, isantya seemoto, indawo yokumisa ixhomekeke kuphela kumqondiso wesibetho sokubetha kunye nenombolo yokubetha, kwaye ayichaphazeli utshintsho lomthwalo, oko kukuthi, ukongeza umqondiso wokubetha kwimoto, imoto iya kujika i-Angle yenyathelo. Ubukho bobu budlelwane bomgca, buhamba kunye ne-stepper motor kuphela kwempazamo kwaye akukho mpazamo inyukayo njalo njalo. Kwenza kube lula kakhulu ukusebenzisa isithuthi sokuhamba ukulawula isantya, isikhundla kunye nezinye iindawo zolawulo.
Iimpawu zeemoto ze-1.Stepper
<1> I-Angle ejikelezayo ilingana nokutsalwa kwegalelo, ke iimfuno ze-Angle echanekileyo kunye nokuma ngokuchanekileyo kunokufezekiswa ngokusebenzisa ulawulo oluvulekileyo.
<2> ukuqala okuhle, ukumisa, ukuphendula okuhle nokubi, ulawulo olulula.
<3> inyathelo ngalinye leempazamo zeAngle lincinci, kwaye akukho mpazamo iyanda.
<4> kuluhlu olulawulwayo, isantya sokujikeleza silingana nobuninzi be-pulse, ke uluhlu lokuhambisa lubanzi kakhulu.
<5> uphumle, i-stepper motor ine-torque ephezulu yokubamba ukuze ime kwindawo yokumisa, ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa i-brake ukuze ingahambisi ngokukhululekileyo.
<6> ine-RPM ephezulu kakhulu.
<7> ukuthembeka okuphezulu, akukho londolozo, amaxabiso asezantsi enkqubo yonke.
<8> kulula ukulahla inyathelo ngesantya esiphezulu
<9> ithambekele ekuveliseni ukungcangcazela okanye isandi sokwenzeka kwisantya esithile
2.Isigama seemoto ezihambayo
* Inqanaba lesigaba: i-logarithm yamakhoyili okonwaba avelisa iindawo ezahlukeneyo zemagnethi kwiipali ze-N kunye ne-M.
* Inani lamanyathelo: Inani leempembelelo ezifunekayo zokugqibezela utshintsho lwamaxesha emagnethi yomhlaba okanye imeko yokuma imelwe ngu-N, okanye inani leempundu ezifunekayo kwimoto ukujikeleza i-Angle pitch pitch. Thatha izigaba ezine zemoto, umzekelo, kukho amanqanaba amane okuphunyezwa kwamanyathelo, ekuthiwa yi-AB-BC-CD-DA-AB, inqanaba lesine imo yokuphumeza amanyathelo, oko kukuthi i-A-AB-B-BC- IC-CD-D-DA-A.
* Inyathelo le-Angle: ehambelana nomqondiso wokubetha, ukufuduswa kwe-angular ye-motor rotor imelwe. = Iidigri ezingama-360 (inani lamazinyo ajikelezayo J * inani lamanyathelo olawulo). Thatha inqanaba lesibini kunye nesigaba sesine seemoto ezinamazinyo e-rotor njengomzekelo wezinyo ezingama-50. Ukuphunyezwa kwamanyathelo amane, inyathelo le-Angle ngu = 360 degrees /(50*4)=1.8 degrees (eyaziwa njengeyonke inyathelo), ngelixa ukwenziwa kwamanyathelo asibhozo, inyathelo le-Angle ngu = 360 degrees / (50 * 8) = 0.9 degrees (eyaziwa njengesiqingatha sinyathelo).
* Ukubeka i-torque: xa i-motor ingenamandla, i-torque yokutshixa ye-motor rotor ngokwayo (ebangelwa zii-harmoniki zemilo yamazinyo yentsimi yamagnetic kunye neempazamo zoomatshini).
* I-torque emileyo: umzuzu wokutshixa we-shaft yemoto xa i-motor ingajikelezi phantsi kwamanyathelo ombane alinganisiweyo. Le torque ngumgangatho wokulinganisa ivolumu (ubungakanani bejiyometri) yemoto kwaye izimele kumandla ombane kunye nokuhanjiswa kwamandla. Nangona i-torque emileyo ilingana nenani le-electromagnetic excitation ampere-Turns kwaye inxulumene nomsantsa womoya phakathi kwe-Rotor-gear rotor, ayicetyiswa ukunciphisa kakhulu umsantsa womoya kunye nokunyusa i-ampere-turn yotshintsho ukuphucula i-static torque, eya kubangela ukufudumeza iimoto kunye nengxolo yoomatshini.
I-Ac Stepper Motor, I-220 Volt Ac Servo Motor, Kuvalwe uMqhubi weSantya seMoto, Iimoto ezihamba ngentambo ezi-6, IServo Motor Actuator, I-Hybrid Stepper Motor,